Isitolo esidayisa yonke impahla Igesi ephendulwa ngamanzi Ephephela Imitha Umkhiqizi kanye Nomthengisi | ANGJI
I-Gas Turbine Flowmeter ihlanganisa imishini yegesi, oketshezi obuketshezi, i-electromagnetism nezinye izinkolelo zokuthuthukisa isizukulwane esisha sezinsimbi zokulinganisa igesi, ukusebenza kahle kwengcindezi ephansi nokusebenza komlinganiso ophezulu, izindlela ezahlukahlukene zokukhishwa kwesiginali nokuzwela okuphansi kokuphazanyiswa okusamanzi, okusetshenziswa kakhulu igesi yemvelo, igesi yamalahle, igesi encibilikisiwe, igesi elula ye-hydrocarbon namanye amagesi.
Igesi TI-urbine Flowmeter ihlanganisa imishini yegesi, i-fluid mechanics, i-electromagnetism kanye nezinye izinkolelo zokwakha isizukulwane esisha sezinsimbi zokulinganisa imishini yegesi, ingcindezi ephansi kakhulu nokusebenza komlinganiso ophezulu, izindlela ezahlukahlukene zokukhishwa kwesiginali nokuzwela okuphansi kokuphazanyiswa okusamanzi, okusetshenziswa kakhulu emvelweni igesi, igesi lamalahle, igesi elincibilikisiwe, igesi elula ye-hydrocarbon namanye amagesi.
Inzwa yokugeleza kwe-turbine nokubonisa insimbi ehlakaniphile edidiyelwe eyenziwe i-turbine Flowmeter yegesi ithuthukiswa ubuchwepheshe obuphansi bamandla we-chip microcomputer technology. umugqa ophindwe kabili uketshezi lwekhristali ekhombisa inezinzuzo eziningi ezisobala, ezinjenge-compact mechanism, ukufundwa kwe-intuitionistic nokucacile, ukuthembeka okuphezulu, akukho ukuphazanyiswa okuvela kugesi wangaphandle, ukulwa nombani nokunye. I-coefficient yensimbi ilungiswa ngamaphoyinti ayisithupha, futhi i-coefficient yethuluzi ayilona umugqa ngesinxephezelo esihlakaniphile, futhi ingalungiswa khona lapho. Isibonisi esicwebezelayo esibonisa uketshezi sikhombisa ukugeleza khona manjalo (izinombolo ezivumelekile ezinamadijithi ama-4) nokugeleza kokuqoqeka (izinombolo eziyi-8 ezivumelekile ezinomsebenzi we-zeroing). Ungalahli idatha evumelekile iminyaka eyishumi ngemuva kokucinywa kwamandla. Ibanga lobufakazi bokuqhuma ngu: ExdIIBT6.
Ubukhulu be-gauge 20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300
Isigaba sokunemba ± 1.5%, ± 1.0% (okhethekile)
Izidingo zesigaba samapayipi aqondile Ngaphambi kwe- ≥ 2DN, ngemuva kwe- ≥ 1DN
Izinto zensimbi Umzimba: 304 insimbi engagqwali
Impeller: high aluminium ingxubevange
Isiguquli: i-cast aluminium
Izimo zokusebenzisa Ukushisa okulingene: - 20C ° ~ + 80 ° C
Izinga lokushisa eliphakeme: - 30C ~ + 65 ° C
Umswakama isihlobo: 5% ~ 90%
Ingcindezi Atmospheric: 86kpa ~ 106kpa
Ukusebenza kokunikezwa kwamandla Ukunikezwa kwamandla kwangaphandle + 24 VDC ± 15%, efanelekayo kokukhipha okungu-4 ~ 20 mA, okukhipha i-pulse, RS485
B. Ukunikezwa kwamandla kwangaphakathi: iqoqo le-lithium battery engu-3.6v10ah, lapho i-voltage ingaphansi kuka-2.0, ngaphansi kwenkomba ye-voltage ivela
Ukusetshenziswa kwamandla sekukonke Ukunikezwa kwamandla angaphandle: ≤ 1W
B. Ukunikezwa kwamandla kwangaphakathi: ukusetshenziswa kwamandla okumaphakathi ≤ 1W, kungasebenza ngokuqhubekayo isikhathi esingaphezu kweminyaka emithathu
Ukuboniswa kwensimbi Ukuboniswa kukakristalu oketshezi, ukugeleza khona manjalo, ukugeleza okuqoqekayo, izinga lokushisa nengcindezi kungakhonjiswa ngesinxephezelo sokushisa nengcindezi
ukukhishwa kwesiginali 20mA, isignali yokulawula ukushaya
Okukhipha ukuxhumana Ukuxhumana kwe-RS485
Ukuxhumeka komugqa wesiginali Intambo yangaphakathi M20 × 1.5
Ukuqhuma kwebanga lokuqhuma I-ExdllCT6
Izinga lokuvikelwa IP65
Olandelayo: Iqoqwana Isilawuli
Igesi ephendulwa ngamanzi